Ivermectin jekiseni, Amoxicillin For jekiseni - Lihua
Albendazole inogadzira anthelmintic iri yeboka re benzimidazole-zvigadzirwa zvine chiitiko chakanangana nehonye uye nehuremu hweyero zvakare kumatanho evakuru echiropa. Pharmacological Action Albendazole inosanganiswa ne eelworm's microtubule protein uye inoita basa. Mushure mealbenzene inosanganiswa ne β- tubulin, inogona kudzivirira kusanzwisisika pakati pealbenzene uye α tubulin inoungana mu microtubules. Microtubules ndiwo akakosha mamiriro eiyo m ...
Zviratidzo Kuvandudza mashandiro ekukura uye kubereka. Mukana wekushomeka kwevhithamini, zvicherwa uye trace element. Paunenge uchichinja maitiro ekudyisa Batsira mhuka mukupora panguva yekupora. Mukuwedzera panguva yekurapa mabhakitiriya. Kukurira kukuru kutapukirwa Mukuwedzera panguva yekurapa kana kudzivirira kwechirwere chepasita. Wedzera kusagadzikana pasi pekunetseka. Nekuda kwesimbi yaro yakakwira, mavitamini uye kutsvaga zviri mukati, zvinobatsira Iyo mhuka kurwisa kupererwa neropa uye kuti ikurumidze ...
Chipimo chemushonga For oral administration. Mombe, hwai, mbudzi nenguruve: 1 piritsi / 70kg huremu hwemuviri. Yambiro Dzakakosha Isingashandiswe mukugadzika nguva yekukandira huku. Inogona kukonzera kusagadzikana kwemukaka wemukaka, mishonga yenguva refu inogona kukonzera kudzikiswa kwevhitamini B uye vhitamini K synthesis uye kufemerwa, inofanirwa kuwedzera mavitamini akakodzera. Reverse Reaction Kushandiswa kwenguva yakareba kunogona kukuvadza itsvo uye nehurongwa hwetsinga, kukanganisa huremu, uye kunogona kuitika sulfonamides chepfu. Kubvisa Period C ...
AdvaCare inogadzira GMP yeLevamisole Hydrochloride Boluses. Levamisole HCL Bolus ndeye yekemikari kirasi inozivikanwa se imidazothiazoles uye inowanzo kuve yakasarudzika-yemutengo wakasarudzika anthelmintic yezvipfuyo. Inowanzo shandiswa se chloralhydrate munyu, uye dzimwe nguva se phosphate. Levamisol HCL inokonzeresa kushandiswa kwembwa nekatsi yakaderera pane yezvipfuyo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti AdvaCare's levamisole HCL boluses ndeyezvinangwa zvezvipfuyo chete, iwe unofanirwa kushandisa chete iyo mhando ine ...
Ivermectin ndeyeboka reboka reavermectin uye rinoita zvinopesana nemakonye uye zvipembenene. Zviratidzo Kurapa kwematumbu emukati, inda, hutachiona hutachiona, oestriasis uye mapere mumhuru, mombe, mbudzi, makwai nenguruve. Contra-zvinongedzo Kutungamira kumhuka dzinoyamwisa. Side Migumisiro Kana ivermectin ikasangana nevhu, iri nyore uye yakasimba inosunga kune ivhu uye inova isingashande nekufamba kwenguva. Yemahara ivermectin inogona kukanganisa hove uye imwe mvura bo ...
Oxytetracycline ndeyeboka re tetracyclines uye rinoita bacteriostatic kurwisa mabhakitiriya eGram-positive neGram-negative akaita seBordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus uye Streptococcus spp. Iko kuita kweoxytetracycline kunoenderana nekudzivirirwa kwebhakitiriya protein synthesis. Oxytetracycline inonyanya kubudiswa mumuti, kwechikamu chiduku mu bile uye mumhuka dzinokamwisa mumukaka. Jekiseni rimwe rinoita t ...
Tylosin jekiseni 20%
Tylosin inorwisa mabhakitiriya ine macrolide ine bacteriostatic action inorwisa mabhakitiriya eGram-positive uye eGram-negative seCampylobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus uye Treponema spp. uye Mycoplasma. Zviratidzo Zvirwere zvepamuviri uye zvekufema zvinokonzerwa ne tylosin inokanganisa tunhu tudiki, seCampylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus uye Treponema spp mumhuru, mombe, mbudzi, makwai nenguruve. Contra zvinoratidza Hypersensitivity kune ...
Levamisole jekiseni 10%
Levamisole inogadzira anthelmintic ine chiitiko chakanangana nehupamhi hwehonye remudumbu uye nekurwisa mapapu. Levamisole inokonzera kuwedzera kweaxial mhasuru toni inoteverwa nekufa mitezo yehonye. Zviratidzo Prophylaxis uye kurapwa kwezvirwere zvemudumbu uye zvemapapu senge: Mhuru, mombe, mbudzi, makwai: Bunostomum, Chabertia, Cooperia, Dictyocaulus, Haemonchus, Nematodirus, Ostertagia, Protostrongylus uye Trichostrongylus spp. Nguruve: Ascaris suum, Hyostrongyl ...
Parizvino, kambani iyi ine vashandi mazana maviri negumi nevatanhatu vane dhigirii rekoreji kana pamusoro, vachiverenga chikamu che80% yehuwandu hwekambani.
Zana rekupona, kuchengeta zvipfuyo kwakasimba, kurima kuri kubudirira
Yedu R & D
Mhando ina dzemishonga mitsva yenyika, matanhatu marudzi ezvigadzirwa zve patent nemhando nhatu dzekugadzirira nzira dzekugadzira patents dzakashandiswa.
Zvigadzirwa zvawo zvinotumirwa kunyika gumi neshanu (Ethiopia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, nezvimwewo).
Ngatitorei kusimudzira kwedu kune yakakwira nhanho
Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.iri yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kukura, kugadzirwa, rokutengesa uye michina mabasa mhuka mhuka, pamwe vakanyorwa guta mamiriyoni 80 Currencykuva.
Nenhumwa ye "Makore Mazana Hupenyu ehupenyu, Yakasimba Kuchengeta Mhuka uye Kubudirira Kwekurima", kambani yakazvipira kuve mudzimba wekutanga-kirasi yepasi rose kurapa kwemhuka chigadzirwa mupi zvinoenderana nehunyanzvi uye matarenda.